I-BunnyStudio: Thola i-Professional Voice-Over Talent bese Wenza Iphrojekthi Yakho Yomsindo Ngokushesha nangokulula | Martech Zone
Anginasiqiniseko sokuthi kungani noma ngubani evula imakrofoni yakhe ye-laptop futhi enze umsebenzi omubi wokulandisa ngevidiyo noma ithrekhi yomsindo yebhizinisi lakhe. Ukungeza iphimbo nochwepheshe bomsindo akubizi, kulula futhi ithalente laphaya liyamangalisa.
Ngenkathi ungaheha ukuyobheka usonkontileka kunoma iyiphi inombolo yezinkomba, UBunnyStudio kubhekiswe ngqo ezinkampanini ezidinga usizo lomsindo lochwepheshe ngezikhangiso zazo zomsindo, i-podcasting, ama-trailer we-movie, ividiyo, abalindi bohlelo lwefoni, noma amanye amaphrojekthi alalelwayo. Banikela ngokufinyelela ezinkulungwaneni zabalingisi bezwi abazimele ngezilimi eziningi ezihloliwe ngaphambilini.
Isayithi likunikeza ithuba lokuhlunga futhi ubuze ithalente abanalo lama-voiceovers, ukubhala, ividiyo, ukuklama, noma ukubhala. Ungakhetha ukubhuka ithalenta olitholayo, wamukele umuntu ongaguqula iphrojekthi ngokushesha, noma enze umncintiswano phakathi kwamathalenta ambalwa wokukhuluma ukuze ukwazi ukuzikhethela owinile! Vele ukhethe insizakalo, ulimi, kanye nenombolo yamagama kusikripthi sakho bese usukulungele ukuhamba:
Dlulisa amehlo kuzwi phezu kwamasampuli - Sesha i-database yabalingisi bezwi, hlola amasampula abo, bese ukhetha okulungele kangcono iphrojekthi yakho.
Thumela iphrojekthi yakho emfushane - Thumela imininingwane yakho yephrojekthi. Ngemininingwane eminingi ongayinikeza, baziqonda kangcono izidingo zakho.
Thola izwi lakho elilungele ukusetshenziswa - Vumela futhi ulande izwi lakho elilungele ukusetshenziswa, elilawulwa ngekhwalithi ngaphezulu noma ucele ukubuyekezwa.
Bengikade ngisebenzisa ipulatifomu esikhathini esedlule ngomsebenzi othile (phambilini bebaziwa ngokuthi yi-VoiceBunny) futhi ngabuyela namuhla ukuthola izwi elisha le-podcast yethu, Martech Zone Izingxoxo. Kungakapheli ihora ngase nginezwi elibhalwe ngokuphelele engilisebenzisa manje esiqeshini sami esilandelayo.
Nansi isingeniso se-podcast:
Nayi i-podcast outro:
Inothi eliseceleni… ijubane lalokhu kubuya kungenzeka kakhulu ngoba bekuyiphrojekthi encane enamagama angaphansi kwayi-100… Ngikholwa ukuthi ukukhetha kwabo ijubane kungaphansi kwamahora ayi-12 kumaphrojekthi amaningi.
Ipulatifomu futhi ikuvumela ukuthi wakhe ibhentshi lakho lokusebenzela lethalente lokusebenzisa izwi oke walisebenzisa ngaphambili futhi ufisa ukulisebenzisa futhi… isici esihle sezinkampani ezifisa ukugcina ukungaguquguquki kokufaka uphawu lomsindo!
Ipulatifomu iphinde inikeze i- API yezinkampani ezifisa ukufaka amaphrojekthi wokukhiqiza ngezwi nangomsindo kumkhiqizo noma isevisi yazo. Futhi, ngezinhlangano ezinkulu, ungaxhumana neBunnyStudio ngamaphrojekthi wevolumu ephezulu noma izinsizakalo ezidinga amafomethi athile, noma ukuhanjiswa okunzima.
Oda Izwi Lakho Manje!
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- UBunnyStudio.
Tags: alalelwayoukuhlela umsindoukukhiqizwa kokulalelwayo okulalelwayoumbhalo oqoshiweumabhebhanaezihudulaizwi le-movie traileri-movie trailer voiceoverizwi lezilimi eziningi ngaphezuluumlindi wohlelo lwefoniisingeniso se-podcastpodcast ngaphandlei-podcastingukukhiqizwa ngemuvaukuqoshwaukuhumushaabalingisi bezwiiphimbo elengeziweumabhebhanaiphimbo elengeziwe